Ikhaya > Imikhiqizo > I-Hypodermic > I-3-Way Stopcock & Isilungiselelo Sokwandiso > 3-Way Stopcock
I-Model No.: CL-IJ0020
Igama lomkhiqizo: I-Three-Way Stopcock
Imininingwane: CL-IJ0020 i-Three-Way Stopcock
1) .Siyahamba nezikebhe ezimbili zeLuer namadoda aseLuer lock.
1. Le stopcock enendlela ezintathu isekela ukusetshenziswa kwe-infusion, i-dosing, i-veous pressure measurement kanye nezinye izinto ezilahlayo, Kungenzeka ukuthi iqhume noma ijobe amanzi ngendlela eqhubekayo, kodwa futhi ingakwazi ukukhipha amanzi ngokuzenzakalelayo .Izinto ezibonakalayo ezibala, ukusebenzisa umkhiqizo kulula qaphela; isibambo esivumayo esingashintsha ama-degrees angu-360, ukuhlinzwa kulula; imicibisholo ikhombisa ukuqondiswa kwe-flow flow direction, kulula ukuyiqonda. Ngokwemfucuza komtholampilo, ukumpontshelwa ngegazi ngesikhathi sokumnika, ukushintshela indlela yokugeleza kwegazi, ukufeza umjovo owodwa noma amaningi ohlangene nokumnika.